Base Station Qaboojinta - Jinghui Environmental Technology Co., Ltd.
saldhiga joogin baahan yahay nidaamka qaboojinta caqli;
Badan makiinadaha waxaa ka shaqeeya 24/7 la kululaynta si joogto ah;
Waxaa fog la socon kartaa iyo xakameeyo xaaladda shaqo ee mashiinada ah qaybiyey xarumaha saldhigga kala duwan ah;
isticmaalka Awooda hawo sax 'waa weyn, waxaa loo baahan yahay shaqaale u qalma ee hawlgelinta iyo dayactirka.
hawada qallalan ka dhigi doonaa guurto ah si ay u gubaan qalabka isgaarsiinta ah, waxay u baahan tahay heerkulka joogto ah iyo qoyaan.
coolers hawada saldhiga JH waxaa ku takhasusay for Shiinaha Unicom, Shiinaha Mobile, Shiinaha Telecom iyo Shiinaha Post.
Midowga Shiinaha ayaa lagu rakibay JH meeldhexaadka ah hawada saldhiga for qaboojinta gudaha, waxa uu u adeegsanayaa hawada JH function dhammayn meeldhexaadka ah si ay u sameeyaan hawada u sameeyaan wareegga dibadda, ka dibna kulaylka ee ay mishiinka gudaha waxaa ka baxsan saaray.
Waxaan rakibi marinka dab ku xirid ee deminaya tuubbooyinka hawada iyo warbaahinta si looga fogaado in uu dabku faafo, oo sidoo kale bixin ka deminaya tuubbooyinka oo warbaahinta la saddex anti-shabagyadoodii si looga hortago kaneecada, cayayaanka, iyo duulaankii ciid,
Isticmaalka heerkulka-fasalka warshadaha iyo shidma qoyaan si ay u ururiyaan heerkulka gudaha iyo dibadda iyo huurka qaraabo, iyada oo algorithms caqli gacanta ku waqti xawaare taageere iyo ku xirid si loo hubiyo in qolka kula heerkulka joogto ah iyo qoyaan.
Under leh heerkulka caqli iyo gacanta qoyaan ka shaqeeya, heerkulka gudaha iyo huurka waxaa mar kasta gacanta gudahood kala duwan oo goobta, shil mar dambe ma guurto dhici on board Bannaanka.
The qaboojiyaha hore aan la saaro, maxaa yeelay xagaaga kulul haddii meeldhexaadka ah hawada ma buuxin karaan shuruudaha qaboojinta ah, coolers hawada JH 'gacanta caaqil si toos ah ku soo jeedin doonaa on qaboojiyaha hawada hore si uu ku qaboojiyo qolka, labada nooc nidaamka qaboojinta wada shaqayn karaan .
Sanadka oo dhan, isticmaalka coolers hawada evaporative xisaabay in ku dhowaad 70% ee waqtiga, in heerkulka sare iyo xaaladda cimilada roobaadka waxa uu u adeegsanayaa jira qaboojiyaha sax iyo waxa ay ku saabsan 30 mar% for isticmaalka, sidaas in sanadlaha ah ee aan ku badbaadin karto kharashka korontada 56%.